Landa ividiyo TikTok No Watermark No Ads - TikTok Downloader Online
Landa amavidiyo we-TikTok ngaphandle kwe-watermark
Isixhumanisi sakho asisekelwa !!!
Thwebula TikTok videos
I-Tiktokfull ingomunye wabalandi abakhulu be-TikTok abatholakala ku-inthanethi ukulanda amavidiyo we-TikTok ngaphandle kwe-watermark. Awudingi ukufaka noma iyiphi isoftware kukhompyutha yakho noma iselula, konke okudingayo isixhumanisi sevidiyo seTikTok, futhi konke ukucubungula kwenziwa ngasohlangothini lwethu ukuze ube ngokuchofoza okukodwa ekulandeleni amavidiyo kumadivayisi akho.
Landa ividiyo kusuka kuwebhusayithi
1. Thola ividiyo - dlala ividiyo ofuna ukuyilanda kudivayisi yakho yeselula, sebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-TikTok.
2. Kopisha isixhumanisi sevidiyo - kopisha i-url yevidiyo kuwebhusayithi
3. Landa - buyela kuTiktokfull bese unamathisela isixhumanisi kunkambu yombhalo ekhasini bese uthepha ku- "Landa"
Landa ividiyo ye-douyin kusuka kuhlelo lokusebenza lweselula
2. Kopisha isixhumanisi sevidiyo - thepha "Yabelana" (inkinobho yomcibisholo ngaphezulu kwevidiyo ekhethiwe), bese uthepha "Kopisha isixhumanisi".
3. Landa - buyela kuTiktokfull bese unamathisela isixhumanisi kunkambu yombhalo ekhasini bese uthepha ku- "Landa".
Ukubuka amavidiyo we-TikTok ngeselula kudeskithophu
Ukubukwa kweselula nokulanda kwe-TikTok. Buka i-Tik Tok ngendlela elula kusuka kusiphequluli sakho futhi ungalanda amavidiyo we-TikTok owabukayo ngaphandle kwe-watermark ngokuqondisa kabusha
Ungayibuka kanjani iTikTok kwikhompyutha
1. Vula isandiso se-google chrome - search TikTok Mobile View & No Watermark Download.
2. Faka isandiso
3. Vula iwebhu yeTikTok - bese uqhafaza ukwengeza ukubuka isipiliyoni seselula
Futhi ufaka isandiso lapha
Umlandi wevidiyo we-TikTok we-Android
Kubasebenzisi be-Android, sakhe uhlelo oluhle olusebenza kahle kumaselula we-Android namathebulethi. Uhlelo lokusebenza lubizwa nge-zzTik
Landa amavidiyo we-Tik Tok ngaphandle kwe-watermark ngokuthepha okukodwa.
Sebenzisa igalari yemidiya ukuqoqa umculo namavidiyo.
Yabelana ngamavidiyo nabangani.
Landa i-zzTik App lapha
Ungalanda kanjani amavidiyo weTik Tok ku-iPhone?
Ungalanda amavidiyo we-Tik Tok ngaphandle kwe-watermark kuma-iPhones kuphela ngesilandi esiku-inthanethi nakwisiphequluli se-Safari sedivayisi ye-Apple. Iya kuvidiyo yeTik Tok ku-iPhone yakho noma i-iPad bese ukopisha i-URL yevidiyo, isithombe, noma umculo. Buyela emuva kusiphequluli seSafari lapho iwebhusayithi yeSaveFrom.net isivele ivuliwe. Namathisela isixhumanisi kunkambu yokufaka bese ucindezela inkinobho yangakwesokudla yenkambu. Ngemizuzwana embalwa, uzothola isixhumanisi sokulanda.
Ngingawathola kuphi amafayela alandiwe?
Ngemuva kokulanda ividiyo ye-TikTok, umculo noma izithombe, wonke amafayela angatholakala kufolda, esethwe ngokuzenzakalela ukugcina konke okuqukethwe ku-Intanethi. Uma ungenawo amanye amasethingi, ifolda ezenzakalelayo ibizwa nge- â € €Downloadsâ €.
Ungayilanda kanjani i-tiktok
Ungalanda uhlelo lokusebenza lwe-TikTok nge-google play yesitolo se-android noma se-apula se-ios. Vula i-google play noma isitolo se-apula bese usesha i-TikTok, ungabona uhlelo lokusebenza lwe-TikTok lokulanda efonini yakho. Uma isifunda sakho singabona uhlelo lokusebenza lwe-TikTok, ungashintsha isifunda siye e-US ukulanda
Ingabe i-zzTik imahhala?
I-zzTik uhlelo lokusebenza lokulanda ividiyo yamahhala ukulanda amavidiyo we-TikTok ngaphandle kwe-watermark. Futhi ubuka ividiyo yeTik Tok kulolu hlelo lokusebenza lula kakhulu futhi elula